အချိုးအစားလှပပြီး ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ခန္တာကိုယ်ကောက်ကြောင်း ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Kpop idol (9) ယောက် | Asia News Bar
အချိုးအစားလှပပြီး ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ခန္တာကိုယ်ကောက်ကြောင်း ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Kpop idol (9) ယောက်
Kpop idol ကောင်မလေးတွေဟာ မိန်းကလေး​တိုင်း အားကျရတဲ့ အလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေပါ။ ပင်ကိုယ်ရုပ်ရည်က ချောမောသလို idol တစ်ယောက်ရဲ့ စံချိန်စံညွှန်းမှီအောင် company တွေကလည်း စနစ်တကျ train ပေးထားကြပါတယ်။
Idol တွေကိုယ်တိုင်ကလည်း work out တွေလုပ်ပြီး အချိုးအစားလှပတဲ့ ခန္တာကိုယ် ရအောင် ကြိုးစားကြပါတယ်။ ဒီထဲကမှ ခန္တာကိုယ်အမိုက်ဆုံး ကောက်ကြောင်း ပိုင်ရှင်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီ စာရင်းဟာ July လ ၆ ရက်နေ့က Dispatch သတင်းဌာနက ရွေးချယ်ထားတဲ့ List ဖြစ်ပါတယ်။
Jennie ရဲ့ အရပ်က5ပေ4(163cm) သာ ရှိပေမဲ့ သူမရဲ့ အချိုးအစားကျနတဲ့ ခန္တာကိုယ်လေးကြောင့် ရှိရင်းစွဲအရပ်ထက် ရှည်တယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။ ခါးသေးသေးလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး work out သေချာကစားထားလို့ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ Body structure ရှိသူ ဖြစ်ပါတယ်။ Job Korea နဲ့ Albamon တို့ရဲ့ စစ်တမ်းကောက်ချက်အရ ကိုရီးယား မိန်းကလေးတွေက Jennie လို ကိုယ်လုံးမျိုး ပိုင်ဆိုင်ချင်ကြပါတယ်တဲ့။
Joy က တော့ Red Velvet အဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာ ခန္တာကိုယ်အလှဆုံးမို့ “Sexy Dynamite” ဆိုပြီး နာမည်ပြောင်ရထားသူပါ။ Joy ဟာ 5ပေ 6လက်မ (158cm) ထိ အရပ်ရှည်ပြီး မော်ဒယ်တစ်ယောက်လို ခန္တာကိုယ် အချိုးအစားပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူပါ။ သူမငယ်စဉ်တုန်းကဆို သူမရဲ့ အရပ်နဲ့ visual ကြောင့် Miss korea ဝင်ပြိုင်ဖို့တောင် ဘေးလူတွေက အကြံ​ပေးကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Twice အဖွဲ့ရဲ့ အငယ်ဆုံးလေး Tzuyu က တော့ အဖွဲ့ရဲ့ visual ဖြစ်သလို အရပ်အရှည်ဆုံး member လည်း ဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ အရပ်က 5ပေ ၇ လက်မ (170 cm) လောက်တောင် ရှည်ပါတယ်။ Tzuyu ဟာ 2019 ခုနှစ်တုန်းက TC Calendar ကနေ ရွေးချယ်တဲ့ ကမ္ဘာ့အလှဆုံးမျက်နှာပိုင်ရှင် အဖြစ် ဖော်ပြခြင်းခံရပါတယ်။
4. WJSN Luda
Luda ကတော့ WJSN အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် debut မလုပ်ခင်ထဲက နာမည်ကြီးသူ ဖြစ်ပါတယ်။ 5ပေ2လက်မ (156.7cm) သာရှိပေမဲ့ သူမရဲ့ ခြေတံလက်တံတွေက ရှည်သယောင် ထင်ရပါတယ်။ ခန္တာကိုယ်ကလည်း ပိန်သွယ်နေတဲ့အတွက် ဓာတ်ပုံလည်း အရမ်းစားပါတယ်။
5. Apink Son Naeun
ခါးအလှအကြောင်း ပြောရင်တော့ Naeun အကြောင်း ချန်ထားခဲ့လို့ မရပါဖူး။ သူမရဲ့ ခါးလေးဟာ 19 လက်မလောက်ထိ ရှိဖူးပြီး ခုလက်ရှိတော့ 21 လက်မ ရှိပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းကို ပုံမှန်လုပ်ပြီး အစားအစာကိုလည်း ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွှတ်တဲ့ diet အစားအသောက်သာ စားပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း သူမရဲ့ လှပတဲ့ ခန္တာကိုယ်လုံးလေးကို နှစ်တွေကြာသွားလည်း ပုံမပျက်အောင် ထိန်းနိုင်တာလို့ ဆိုပါတယ်။
6. Oh My Girl YooA
YooA ရဲ့ ခြေဆံလက်ဆံ တွေကရှည်တဲ့အတွက် လူတွေက သူမကို 5ပေ၃လက်မ (161cm) လောက်ထိ ရှည်မယ်လို့ ထင်ကြပါတယ်။ တကယ်တမ်း အာ့လောက်မရှည်ဘဲ YooA ဟာ ခန္တာကိုယ် သေးသေးကျစ်ကျစ်လေး ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက် ထိုကဲ့သို့ ထင်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမမျက်နှာလေးဟာ အရုပ်လေးလို လှပပြီး ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အတွက် သူမကို လူသိများကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Lisa က တော့ အဖွဲ့ထဲမှာ ဒုတိယ အရပ်အရှည်ဆုံး ထိုင်းမလေးပါ။ 166.5cm (5 ပေ 5.6 လက်မ လောက် ရှည်ပြီး ပိန်ရှည်ရှည် ခန္တာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ Lisa ဟာ ငယ်ငယ်လေးထဲက အကပညာကို သင်ယူခဲ့တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် body structure လှအောင် ခုမှ အထူးတလည် ကြိုးစားနေစရာမလိုတဲ့ idol လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
8. Lovelyz Mijoo
Mijoo ကတော့ Lovelyz အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပွဲဦးမထွက်ခင်ထဲက သူမရဲ့ မွေးရပ်မြေ Okcheon မှာ အလှဆုံးကောင်မလေး အဖြစ် နာမည်ကြီးပါတယ်။ အရပ်ကလည်း 5ပေ6လက်မ (167cm) ထိ ရှည်ပြီး model တစ်ယောက်လို slim body ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။
9. TWICE Sana
Twice အဖွဲ့ရဲ့ japan မလေး3ယောက်ထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်သူ Sana ကတော့5ပေ6လက်မတောင် အရပ်ရှည်ပါတယ်။ Stage ပေါ်မှာဆို စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အလှနဲ့ လှပနေတတ်ပြီး off stage မှာဆို ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ Sana လေးက ပရိသတ်တွေရဲ့ အာရုံကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Source : kpopboo
Next “ARMY Day” ရဲ့‌နောက်ကွယ်မှာ လေးနက်တဲ့အဓိပ္ပါယ်ရှိနေကြောင်း ပြောပြခဲ့တဲ့ Suga »
Previous « တချိန်တည်းမှာ အတူတူနာမည်ကြီးလာခဲ့ကြတဲ့ Thai TV3 မှ ထိပ်တန်းအနုပညာရှင်များ
BLACKPINK ကို ကူးချနေတယ်လို့ ဝေဖန်တဲ့ သူတွေကို ပြန်ဖြဲခဲ့တဲ့ တောင်ကိုးရီးယားအကျော်အမော် Female Rapper
2021 Season Greeting အတွက် BLACKPINK ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ Outfit တွေရဲ့ အံ့အားသင့်စရာတန်ဖိုး
အရှက်အကြောက်ကြီးတဲ့ Mina လေး သောက်ထားလို့ ပလပ်ကျွတ်လာရင် ဘယ်လိုတောင်ချစ်ဖို့ကောင်းသလဲဆိုတာ…
ထူးျခားေကာင္းမြန္တဲ့အသံပိုင္ရွင္ေယာက္်ားေလး idol (၆) ေယာက္
‘Youth With You’ အပါအဝင် Idol ပြိုင်ပွဲအစီအစဥ်အားလုံးကို ပိတ်ပင်တားမြစ်လိုက်တဲ့ တရုတ်အစိုးရ